“Ka Obi Gị Ghara Ịtụgharị” (Ilu 7:25)
AKỤ̀ NDỊ SI N’OKWU CHINEKE | ILU 7-11
Iwu Jehova nwere ike ichebe anyị. Ma, ihe ga-eme ka o chebe anyị bụ ma anyị mee ka ọ dịrị anyị n’obi. (Ilu 7:3) Ọ bụrụ na onye na-efe Jehova ekwe ka iwu Jehova pụọ ya n’obi, ọ ga-eme ka ọ dịrị Ekwensu mfe iji aghụghọ ya dị iche iche ghọgbuo onye ahụ. Ilu isi 7 kwuru maka otu nwa okorobịa kwere ka a rafuo ya. Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’ihe ndị o mejọrọ?
Setan na-eji ihe ndị na-amasị akụkụ ahụ́ anyị dị iche iche achọ ime ka anyị hapụ Jehova
Ma amamihe na nghọta ga-enyere anyị aka ịmata nsogbu ime ihe ọjọọ ga-akpatara anyị. Ọ ga-emezi ka anyị gbaara ihe ọjọọ ahụ ọsọ
mailto:?body=“Ka Obi Gị Ghara Ịtụgharị”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016366%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Ka Obi Gị Ghara Ịtụgharị”